“ချမ်းသာချင်ရင် ငွေမစုပါနှဲ့(ချမ်းသာချင်သူတိုင်းဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ)” – စွယ်စုံသုတ
ပိုက်ဆံစုရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုတော့ ကျနော် ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ပါတယ်
လျော့ကျလာမှာပါ ကုန်စျေးနှုန်းတွေကလဲမြင့်တက်လာနေအုံးမှာပဲမိတ်ဆွေ ငယ်ငယ်က ငွေ ၁သောင်းဟာ သိပ်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်
အတွက် ဘဏ်မှာ တလ၃သောင်းစီဖြစ်ဖြစ် ပုံမှန်စုထားတဲ့ငွေဟာလည်း တချိန်ငွေကြေးဖောင်းပွလာမှု ကုန်စျေးနှုန်းမြင့်တက်လာမှုတွေရဲ့ မိုးကြိုးပစ်မှုကို ဘဏ်မှာစုတာအတိုးရတယ်ကွဆိုတဲ့ ထန်းလက်သေးသေးလေးနဲ့ ကာနိုင်မယ်ထင်ပါသလား?
အမှန်တကယ်က ချမ်းသာချင်ရင် ပိုက်ဆံကိုသုံးရမှာပါ ငွေကိုအသေမထားပဲ ငွေနဲ့ငွေ မိတ်ဆွေဖွဲ့ခိုင်းရပါလိမ့်မယ် ဒါမှသာ တိုးပွားမှုရှိလာနိုင်မှာပါ ပိုက်ဆံသုံးတဲ့နေရာမှာ ဦးနှောက်လေးပါ
တွဲသုံးရင် ပိုမြန်ဆန်ပါလိမ့်မယ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ ပြောရရင် အဝတ်အစားတွေဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံသုံးလိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူချမ်းသာဖို့အတွက် သုံးတာပါ
၁.လက်လီဝယ်ဖို့သုံးမယ်ဆိုရင် လိုချင်တာလေးတွေရလို့ စိတ်ချမ်းသာပါမယ်(ဖြုန်းတယ်လို့ မပြောလိုပါဘူး အနည်းဆုံးတော့လိုချင်တာရရင် စိတ်ချမ်းသာတတ်ကြသည်မဟုတ်လား
ဒီလိုငွေသုံးခြင်းကတော့ ဦးနှောက်လေးပါတွဲသုံးတာမျိုးပါသေချာပါတယ် ငွေသုံးခြင်းကသာ ကျနော်တို့ကို ချမ်းသာမှုတွေပေးတတ်တာပါ ကိုယ်ရောစိတ်ရော တခုမဟုတ်တခုကို
ချမ်းသာစေတာပါပဲ သူဌေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပါ သူတို့တွေရဲ့ဝင်ငွေတွေဟာ ငွေသုံးခြင်းကနေ စီးဝင်နေတာပါ များများသုံးလေ များများဝင်လေပါပဲ ဒီလုပ်ငန်းတခုပြီး နောက်လုပ်ငန်းတစ်ခု စသဖြင့် ထပ်ကာထပ်ကာငွေကိုသုံးသုံးသွားကြတာပါကဲ
ဒီတော့ နောင်၁၀နှစ်မှာ ဖြစ်လာနိုင်တာတွေကို ကြိုတွေးပြီး ငွေကိုစုမလား သုံးမလား ဆုံးဖြတ်ကြပေါ့ဗျာ
လျော့ကျလာမှာပါ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကလဲမြင့်တက်လာနေအုံးမှာပဲမိတ်ဆွေ ငယ်ငယ်က ငွေ ၁သောင်းဟာ သိပ်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်
အတွက် ဘဏ်မှာ တလ၃သောင်းစီဖြစ်ဖြစ် ပုံမှန်စုထားတဲ့ငွေဟာလည်း တချိန်ငွေကြေးဖောင်းပွလာမှု ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာမှုတွေရဲ့ မိုးကြိုးပစ်မှုကို ဘဏ်မှာစုတာအတိုးရတယ်ကွဆိုတဲ့ ထန်းလက်သေးသေးလေးနဲ့ ကာနိုင်မယ်ထင်ပါသလား?
“အသက် ၆ နှစ်မတိုင်ခင် ပျိုးထောင်ပေးရမယ့် အ လေ့အကျင့်ကောင်း (၆) ခု”